Sodàna: Ny Tafika ONU-UA Ao Darfour, Sekolin-jaza Madinika Iray Tena Lafo, Ny Fiverenan’ireo Bibidia Ao Sodàna Atsimo Sy Ireo Fanehoankevitra Mikasika Ny Blaogera Sodaney Pelaka Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2018 2:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Português, English
Mizara an'ireo fijeriny mikasika ny vaovao vao haingana ny The Sudanese Thinker [An] izay milaza ny naneken'i Sodàna an'ireo tafiky ny Firenena Mikambana sy ny Firaisambe Afrikana ao Darfour.
Momba ny faneken'i Sodàna ireo tafiky ny ONU_UA, aza adino fa narahana fepetra izy ireny. Ny fepetra dia hoe miaramila avy amin'ny tany afrikàna no handrafitra azy ary ho eo ambany fifehezan'ny Firaisambe Afrikàna. Tsy maintsy arindra ireo zavatra roa ireo. Tsy dia nahafaly ahy manokana ny nandrenesako ilay vaovao, satria nihevitra aho fa efa tetikady mahazatra ny “Ndeha isika handany fotoana”. Ankehitriny, hafa mihitsy no fahitàko ny fandehan-jazavatra, raha ny marina dia tena raovo tanteraka amin'io fivoarana io aho, saingy mitandrina kely ihany ary milaza aminareo mba hanao toy izany koa.
Amjad [En], blaogera sodaney iray monina ao Oman miresaka amintsika ny Sekoly Iraisam-pirenena ao Khartoum sy ny saran'ny fampianarana lafobe amina Sekolinjaza madinika
Alaivo sary antsaina anie, ny latsakemboka isantaona ho an'ny sekolinjaza madinika dia manodidina ny 17,840 Livres Soudaney vaovao. $1 USD = 2.1 NSP, noho izany ndeha zaraintsika io amin'ny 2.1.. 17,840/2.1 = $8495 USD. Fa inona ity tantara ity? Maherin'ny 8000US $ ho an'ny sekolinjaza madinika? Izao indray dia hojerentsika ny saran'ny sekoly ambaratonga faharoa. Ho an'ny 3eme sy ny kilasy faharoa, ny sarany dia 31240 livres soudaney vaovao, izany hoe manodidina ny $15,000 USD. Ary ho an'ny dingana voalohany sy ny famaranana, manodidina ny $16,500 USD.
Mikasika lohahevitra iray hafa tanteraka, nihetsika tamin'ny fomba ratsy ireo Sodaney nanoloana blaogy iray vaovao nosokafana sodaney pelaka iray atao hoe Ali. Ity no santionany tamin'ireo fanehoankevitra.
Ndeha mamaky boky iray na zavatra sahala amin'ity ry ilay mainty ity a! ary avelao ny R & B izay henoinao, mino aho fa mahasarika kokoa anao i Craig Davis noho ny hafa ary ekena, mankahala pelaka aho, ilay karazana …… ity lol.
Toy izao no navalin'i Ali:
Ekena, Sodaney aho ary faly koa amin'ny maha pelaka ahy. Amin'ny fahalalako, manan-jo hamoaka izay tiako aho, raha mbola tsy manisy ratsy olona.
Mandritra izany fotoana izany, sosotra tamina tatitra iray i Black Kush [An] izay nametraka an'i Sodàna ho toy ny laharana voalohany amin'ireo firenena bankirompitra erantany:
Hitako fa tsy azo ekena ilay tatitra farany navoakan'ny Failed States Index 2007 (Lisitr'ireo Fanjakana Mitotongana tamin'ny taona 2007) ary hadalàna io. Iray tamin'ireo famoahana izay tsy mahatanty ny fandalinana io. Manana zavatra maro azoko hanatsiniana ny fireneko aho, saingy tsy manasokajy azy ho toy ny fanjakana mitotongana. Azoko antoko tsara ny amin'izay.
Mametraka an'i Sodàna eo amin'ny loha-laharana ilay Tondro, arahin'i Iraka sy Somalia. Mahafantatra daholo ireo olona salama saina eto ambonin'ny tany fa i Somalia dia tsy nanana governemanta nandritra ny folo taona farany. Tsy nisy FANJAKANA akory aza! Ary ahoana no hamaritanao ny vono olona nisy tao Iraka, miaraka amina governemanta tena tsy afa-manoatra tohanan'ireo Amerikana ? Hazan'ny ady sivily izy, tsy nanana fifehezana ireo faritaniny ny governemanta, sy ny sisa… Azonao antsoina amin'izay tianao iantsoana azy i Sodàna, fa tsy mitotongana kosa. Anontanio aloha ireo Somaliana sy ireo Irakiana mikasika izay eritreretiny!
Ho famaranana, vaovao tena tsara: i Black Kush dia nametraka tamin'ny tambajotra ihany koa an’ireo sary mahafinaritra mikasika an'ireo bibidia izay niverina ao Sodàna Atsimo, taorian'ireo taompolo roa lava nisian'ny ady sivily feno rà nandriaka